Tsy tsiambaratelo fa maro ny fivarotana fivarotana amin'ny andro farany amin'ny vakansy. Izany dia ahafahanao manapa-kevitra hoe inona ny fahatsiarovanao tadiavinao hividianana, inona no hividianana ny havanao sy ny tenanao ho fahatsiarovana ny dianao. Ny lahatsoratra dia ahafahanao manomana mialoha ny fividianana izany. Andao hojerentsika ny zavatra mahazatra indrindra amin'ny mpizahatany izay miala sasatra any Korea Atsimo .
Inona no fitahiana entin'ny Korea Atsimo?
Ny fividianana malaza indrindra dia azo alaina amin'ny lisitra manaraka:
Vokatra amin'ny artista. Ireo dia karazana varotra vita amin'ny seramika, hazo, mpaka sary puche, elo parasitika avy amin'ny masoandro, fitoeran-drano, boaty ary ireo tompom-pahefana karatra voaray miaraka amin'ny renin'ny perla, sary hosodoko na sharifara. Raha ny fantatra, dia tsara ny manonona ireo tombo-kase ao Tojang, izay nampiasaina tany Korea hatramin'ny fotoana tsy voafetra toy ny sonia manokana.
Masques - tsy latsaky ny hazakazaka mandeha. Nosoratana tamin'ny loko mamirapiratra, tsy mahazatra ary indraindray na dia mampatahotra aza, dia malaza amin'ny mpizaha tany izy ireo. Ny Koreana dia efa nampiasaina mba hiarovana ny tenany amin'ny fanahy ratsy, ary amin'izao fotoana izao dia anisan'ny kolontsain'i Korea Atsimo izy ireo.
Souvenirs amin'ny sakafo. Anisan'ireny ny kimchi (sauerkraut miaraka amin'ny zava-manitra miavaka), tena reharehan'ny sakafo avy any Korea . Ho fanomezam-pahasoavana ho an'ny ankizy na mpiara-miasa dia afaka mitondra zava-mamy, izay tena mahaliana indrindra ny sôkôla misy dipoavatra, ginseng, cactus, sns. Ny fampisehoana tena tsara amin'ny dia dia mety ho karazana hazokely vy.
Zava-pisotro. Fantatr'ireo mpizaha tany fa afaka mitondra an'i Korea Atsimo ho toy ny fanomezana ianao: Ireo teokan-dite (indrindra ny dite maitso), ary ny fototry ny ginseng. Ny alikaola asehon'ireo zava-pisotro makkoli (divay dairy), sôhû (rice vodka), munbézhà (fisotroana vary sy varimbazaha), ary ny karazan-trondro rehetra - ny voankazo ary na ny floral koa aza.
Cosmetics. Midika ho an'ny fikarakarana ny tarehy sy ny vatana eto amin'ny premium, indrindra fa ny Cosmetics ankehitriny no heverina ho anisan'ny tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ny ankamaroany dia mifototra amin'ny vokatra voajanahary (herbal medikaly, ginseng), hypoallergenic ary tsy dia misy vidiny loatra. Izany no mahatonga ny fanontaniana hoe inona no hitondra azy ireo avy any Korea Atsimo, maro ireo ankizivavy sy vehivavy no mamaly amin'ny fomba samihafa: hany Cosmetics ihany!
Clothing. Voalohany indrindra, ireo dia ireo akanjo nasionaly antsoina hoe hanbok. Ankoatra izany, ireo mpizahatany dia mividy zavatra ao anaty atiny, rindrina, tavoahangy, lambam-pandriana.
Ravaka. Avy amin'ny zavatra azo vidiana any Korea Atsimo, io dikan-tsoratra amin'ny fahatsiarovana io dia lafo kokoa, saingy, ary tsy hay hadinoina. Eto ianao dia mahita volamena tsy mahazatra ahitana tononkalo mavo, volafotsy ary firavaka maro samihafa.
Aiza ny fividianana tsara indrindra any Korea Atsimo?
Ny tanàna tsara indrindra ho an'ny fividianana dia mazava ho azy ny renivohitr'i Korea Atsimo - Seoul mahafatifaty. Eto ianao dia mahita zavatra, na inona na inona ary na mihoatra aza. Ho an'ny fividianana, ireo mpizaha tany dia mandeha any amin'ireo faritra malaza any Gangnam na Mendon , eny an-dalamben'i Itavon sy Insadon, feno trano fivarotana, fivarotana ary fivarotana. Tsy dia malaza loatra ny tsenan'ny Namdaemun , izay misy ny vidiny ambany indrindra any Seoul. Ny tsara indrindra dia ny tonga aty amin'ny hariva, rehefa fivarotana maro no manokatra fotsiny.
Ho tsara vintana ianao raha ny datin'ny fitsangatsanganana dia mifanipaka amin'ny fotoan'ny fivarotana lehibe mandritra ny fahavaratra, izay atao ao amin'ny Jolay na Aogositra, na ny fetibe fivarotana Koreana. Mandritra io vanim-potoana io dia omena fanampiana goavana ny vahiny. Amin'izay fotoana izay ihany, afaka mamonjy kely amin'ny fividianana ianao amin'ny fandehanana any amin'ny fivarotana tsena tsy misy haba. Amin'ny fandefasana tapakilam-pivarotana indray, afaka mahazo refy hetra amin'ny 10% ianao.
Raha ny karama manerantany dia mora amin'ny fanaovana plastika plastika izy ireo, saika any amin'ny faritra rehetra any Korea Atsimo dia misy ny fahafahana toy izany. Saingy eny an-tsena dia afaka mandoa mora foana ianao.
Cleopatra ho an'ny fantsika
Fiompiana trondro ao an-trano - tsotsotra tsotra
Bolero amin'ny akanjo fampakaram-bady
Famaritana virosy amin'ny ankizy
Manamboatra ny tenanao ao an-dakozia
Ahoana no fomba hahazoana haingo tsara tarehy?
Dinamic meditation Osho
Kate Mara dia ho lasa vadin'i Jamie Bell
Karpona ao anaty foitra
Saron-tsoavaly vita amin'ny volamena
Akanjo fampakaram-bady ho an'ny vehivavy